Xildhibaan Fiqi: Waxaan ayidayaa in la soo qabto dambiilihii dilay Bajaajlaha – Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ku booriyey Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqda Muqdisho, inuu ka dhabeeyo in gacanta lagu soo dhigo askari maanta degmada Waaberi, Muqdisho, ku dilay wiil dhalinyaro ah, oo ka mid ahaa Bajaajleyda Muqdisho.
Dhalinyaro fara badan, oo ay Marxuumka isku shaqo wada ahaayeen, ayaa dibadbax ka sameeyey isgoyska KM4 iyo meelo kale oo ka mid ah Waabari oo ay ku jirto goobta dilku ka dhacay, waxaana ku soo baxay Duqda Muqdisho, Injineer Yariisow, oo u sheegay in aysan dowladdu raali ka ahayn in si xaq-darro ah lagu dilo dhalinyarada.
Sidaas oo kale ayuu Xildhibaan Fiqi sheegay in ay tahay waxaan la qaadan karin in dhalinyarada kaxaysa Bajaajta, iyada oo laga xirtay inta badan wadooyinkii, loogu daro dil, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in wiilkii maanta la dilay, uu u dhintay $5, sida uu hadalka u dhigay. Warar kalena waxay sheegayaan in askariga dilka geystay uu ka tirsanaa Ciidanka Minishiibiyada.
Hadalka Xildhibaan Axmed Macali Fiqi ayaa u dhignaa sida soo socota:-
Waxaan ayidayaa baaqii Guddoomiyaha gobolka, Yariisow, in danbiilihii diley willkan dhallinyarada ah ee xoogsatada ahaa, Allaha u naxariistee, sharciga la horkeeno sida ugu dhaqsiyaha badan.
Suurtagal ma ahan in shacabka laba dhinac laga dilo ama laga ciqaabo, Al-shabaabna in ay qarxiso maalin kasta, ciidamada dawladduna ay gar-darro ku dilaan.
Haddii dhallinyaradii ay ku sabreen jidadka la xiray, haddii ay u adkaysteen xannibaadaha ay kala kulmaan ciidamada wadooyinka la geeyey, ma mudna in loogu daro dil, oo ay $5 ka qaalisanaato nafta muwaadinka.
Aad ayaan uga xumahay hab-dhaqankaas dawladnimada ka baxsan, waxaana u tacsiyadaynayaa qoyskii marxuumka maantay la dilay, asagana Raxmaddii Eebe Allaha siiyo.